Thursday November 09, 2017 - 11:48:14 in Wararka by Super Admin
Maamulka Bishaar Al-asad iyo Maleeshiyaad shiica ah oo katirsan Ururka Xisbullaah ayaa ku dhawaaqay in ay la wareegeen magaalo istiraatiiji ah oo dhacda Bariga wadanka Suuriya.
Maleeshiyaadka Calmaaniyiinta Kurdida ayaa taageera ka helaya Mareykanka
Wararka ka imaanaya gobolka Deyruzuur ayaa sheegaya in ciidamada Nidaamka Suuriya iyo taageerayaashiisa shiicada ah ay qabsadeen magaalada Albookamaal ee kulaasha xuduud beenaadka ay wadaagaan Ciraaq iyo Suuriya.
Wakaalada Wararka SANA ayaa sheegtay in ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka Xisbullah ay si buuxda uqabsadeen magaalada oo ah meeshii ugu dambeysay oo dagaalyahanada Ururka ‘Dowladda islaamiga ah’ ka maamulaan Suuriya.
Taliye katirsan Ciidanka Bishaar Al-asad ayaa wakaaladda wararka Reuters u xaqiijiyay in ciidamadoodu ay gacanta ku dhigeen xarunta magaalada iyo dhammaan saldhigyada booliska.
Guddiga xuquuqul insaanka dibad joogga ah balse si dhow ula socda dagaalka Suuriya aya xaqiijiyay in qeybo badan oo Albookamaal katirsan ay qabsadeen ciidamada Huwanta ah halka bariga magaalada ay wali ku suganyihiin Xoogaga Ururka Dowladda Islaamiga ah.
"Guutooyin katirsan Ciidanka Suuriya ayaa xuduudda ka gudbay iyagoo iskaashi ka helaya xoogaga Xashdiga Ciraaq si ay u hareereeyaan Albookamaal illaa ay kasoo gaaraan qeybta waqooyi” sidaas waxaa faafisay wakaaladda wararka Nidaamka Suuriya.
Dhinaca kale isbaheysiga Mareykanku hoggaaminayo ee duullaanka ka wada Ciraaq iyo Suuriya ayaa sheegay in howlgal habeen dagid ah ka fuliyeen magaalada Albookamaal ayna burburiyeen gaadiid ay wateen 10 dagaalyahan oo katirsan Ururka dowladda Islaamiga ah.
Waxa loogu yeero Q.Midoobe ayaa sheegtay in Tobanaan kun oo qoys ay isaga barakaceen magaalada Albookamaal kadib duqeymo ay diyaaradaha dagaalka Ruushka ka geysteen magaalada.
Sidoo kale Maleeshiyaadka Malaaxidada Kurdiyiinta ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku heynta degmada Markadah oo aheyd magaaladii ugu dambeysay ee Ururka Dowladda islaamiga ah uu uga sugnaa gobolka Xassakah, qabsashadan ayaa maleeshiyaadka Kurdiyiinta YPG usuurta gelinaysa in ay si toos ah isugu xirtaan Deyruzuur iyo Al-xasakah.
Hoggaamiye katirsan maleeshiyaadka Mareykank taageero ee SFD ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in maalmaha soo socda uu isbahaysiga caalamiga ah iclaamin doono guul uu ka gaaray dagaalka Suuriya.
Qoysaska Barakacayaasha ah ayaa xaalad adag ku wajahaya dhulka saxaraha ah ee kala qeybiya wadamada Ciraaq iyo Suuriya.
Gobolka Deyruzuur oo ah gobol hodon ku ah shidaal ayay dhinacyo kala duwan ukala tartamayaan qabsashadiisa, Albookamaal waa magaaladii ugu dambeysay ee xoogaga dowladda Islaamiga ah uga sugnaayeen Suuriya kadib markii bishii lasoo dhaafay laga qabsaday magaalooyinka Raqqa iyo Deyruzuur.
Xoogagan ayaa sidoo kale lagasoo riixay dhammaan dhulkii ay uga sugnaayeen Ciraaq marka laga reebo degmada Raawah ee gobolka Al-anbaar galbeedka wadankaasi, jimcihii lasoo dhaafay ayay aheyd Markii ciidamada shiicada Ciraaq ay qabsadeen magaalada xuduudeedda Al-qaa'im.